Umehluko phakathi kwe-Ball Valve ne-Butterfly Valve Ukuthuthukiswa kwesheke valve kunobudlelwano obungenakwehlukaniswa namabhizinisi ezimboni. Ngesikhathi sokukhula kwamabhizinisi ezimboni, ukusetshenziswa kwe-valve yokuhlola kubalulekile. Ukuzivumelanisa nentuthuko ...
Yini i-valve yebhola ukuvela kwe-valve yebhola kwakungemva kweMpi Yezwe Yesibili. Yize ukwakhiwa kwe-valve yebhola kusukela ekuqaleni kwekhulu lama-20, leli patent lesakhiwo lehlulekile ukuqedela izinyathelo zalo zokuthengisa ngenxa yelimi ...
Izinzuzo Zokusebenzisa i-Ductile Iron njengezinto ze-Valve I-ductile iron ilungele izinto ze-valve, ngoba inezinzuzo eziningi. Njengensimbi yensimbi, i-ductile iron yathuthukiswa ngo-1949. Okuqukethwe yikhabhoni yensimbi yensimbi kungaphansi kuka-0.3%, kuyilapho ...
Umehluko phakathi kwe-Resilient Setated Butterfly Valve ne-Metal Seated Butterfly Valve Butterfly valves, inesakhiwo esihlangene, ukwakheka okulula, ukusebenza kahle, nokugcinwa kalula. Zingenye yamavalvu ezimboni athandwa kakhulu. Sivamile ...
Umehluko phakathi kweBalve Valve ne-Butterfly Valve Umehluko omkhulu phakathi kwamaveluvemvane namavalvu ebhola ukuthi ivalveve uvemvane ivulwa ngokuphelele noma ivalwe ngokusebenzisa idiski ngenkathi i-valve yebhola isebenzisa umgodi ...